Nzụkọta, helna-elekọta Aka, na Rekụkọ puppy - Nkịta Ahụike
Tupu Readinggụ n'ihu:
Tupu ozuzu gị Anụọhịa, biko gakwuru a vetiran soja nwoke. Ozi a dị n’Ajụjụ a ekwesịghị ịkọwa n’ụzọ ọ bụla dị ka onye dochie anya nlekọta anụmanụ na ndụmọdụ. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịgbalị ịchọta onye dọkịta na-ahụ maka ụmụ anụmanụ nke maara nsogbu ịgba mgba nke canine. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na-ebu ọrụ ma na-ata ahụhụ, ọ ga-adịkarịrị ndị na-agwọ anụmanụ ahụ nkịta anya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị dọkịta na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa mberede nwere ike ịmara nke ọma na nsogbu ịgba ume. Obi abụọ adịghị ya na nke a maara nke ọma na, nyere mmasị, nkịta ga-ada ụda na elekere abụọ nke ụtụtụ mgbe ụlọ ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa na-emechi emechi. Ozo, biko juo ndi dibia veta tupu imalite ozuzu. Dị ka ọ dị ndị mmadụ, nlekọta nwa bu ihe dị mkpa na nkịta.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere anụ ọhịa whelping, BIKO egbula m na mgbaàmà na ajụjụ. Nke mbu, abughi m vetianteri ma ya mere na erughi m iza. Nke abuo, adighi m 24/7 na-aza ajuju.
Mgbe ị na-agwọ anwụrụ, ihe ga-egosi nchegbu kwesịrị ịgwa onye dibịa anụmanụ ọsọ ọsọ karịa ka emechaa. Ọ bụrụ na ị dee m banyere ihe mberede ma ọ bụ enwere ọnọdụ mberede, ekwere m gị nkwa na m ga-agwa gị bụ ịkpọ vet.
Edere FAQ a maka ndị na-eme atụmatụ ụmụ nkịta. Achọpụtara m na enwere ọtụtụ ndị hụrụ onwe ha na nwanyị nwere afọ ime mgbe nke ahụ abụghị ihe ha chọrọ. Ajụjụ a ka ga-enwe ọtụtụ ozi maka gị. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ahụ, biko mee ka anụ ọhịa ahụ nyocha ya ngwa ngwa ozugbo enwere ike.
Ọ bụrụ na ọ nwebeghị nlekọta nne dị mma - dịka vitamin, nri, na mmega ahụ - ọ nwere ike ịnwe nsogbu ndị a na-atụghị anya ya mgbe ha na-agba ume na / ma ọ bụ na-azụ ụmụ nkịta ahụ.
Họrọ Stud Dog
Oge Ime Ọgwụ
Kwadebe Ihe Mgbakwunye Gị
Na-enyere aka na-awụba n'oké osimiri
Oge Puzụ ụmụ nkịta
Ingchọta na imeta ndị nkịta na-azụ ahịa
Reedzụta atụrụ nke ụmụ nkịta bụ ọrụ a ga-arụ nke ukwuu. Na-ebi ndụ nke aka gị maka ọtụtụ ebumnuche. Offọdụ n'ime ihe ndị ahụ ga-abụ nke dị mma, ụfọdụ agaghị eme. Mana ekwesịrị iji nlezianya chebara mkpebi a echiche nke ọma.
Tupu ị gụkwuo, biko gụkọta Nzuzo Nkịta Gị. Ọzọkwa, a ga-ewere akwụkwọ a naanị dị ka mmalite. Ọ bụrụ na ị gụchaa akwụkwọ a, ị ka chọrọ ịzụlite nkịta ọhịa gị, ana m atụ aro ka ị nweta ma gụọ opekata mpe akwụkwọ ụfọdụ edepụtara na ngalaba akụ.
Ọzọkwa, ana m akwado ka gị na onye na-azụ bitch gị kpakọrịta maka nduzi n'okwu a. Nkịta kwesịrị ịzụ otu ihe na otu ihe kpatara ya: Iji meziwanye ụdị. Ọ bụrụ na ị na-agụ ihe a ebumnuche nke ịzụlite ịzụlite ngwa ngwa, kụziere ụmụaka ihe, ma ọ bụ iji mezuo mkpa nwanyị nke nwanyị gị, biko egbula nkịta gị!
Kpọrọ, dịka ị ga-amụta ka ị na-agụ, eme nke ọma, ịzụlite anaghị adịkarị ego; o yikarịrị ka ego ọ ga-ewe! Umuaka nwere ike guru akwukwo karie ka ichoro gi mgbe ihe mebiri na ozuzu. La nkịta na ụmụ nkịta ya niile nwere ike ọ bụghị nkuzi gị ka ịchọrọ mana ọ na-eme kwa oge.
Ma, n'ezie, maka nke ikpeazụ, ọtụtụ nkịta chọrọ n'ezie ịbụ onye ị hụrụ n'anya 24 awa ụbọchị, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka nkịta gị nwee obi ụtọ, gbuo ya ma soro ya nọrọ karịa! Mana, ọ bụrụ n’ikpebie ịga n’ihu, biko biko gụọ Ajụjụ a nke ọma. Ọ na - ekpuchi nsị nke ndị nkịta iji mepụta nkịta dị mma ma nye ha mmalite kacha mma na ndụ.
Ọ bụrụ na ị nwere nkịta dị ime ugbu a, biko ejikwala Ajụjụ a dị ka isi iyi nke ozi. Chọọ onye dibịa anụmanụ ruru eru nọ n'ógbè gị iji nyere gị aka n'ịkwa nkịta.
Ihe omuma di na Ajuju ajuju a nwetara site na omuma nke onwe m, nyocha site na akwukwo na site na igwa ndi ogugu ihe omuma. Ọtụtụ ekele na-agara Vicki Blodgett na Terri Herigstad maka ịdị njikere ịkekọrịta nka ha meriri. Ọzọkwa, m ga-ekele Cindy Moore maka nkwado ya na nke mbụ m na naanị FAQ oru ngo.
Gini ka m kwesiri ime tupu m buru ahihia?
Nke a bụ n'ezie ajụjụ abụọ. Kedu ihe m kwesịrị ịme tupu m kpebie ịzụlite nkịta m, ma, ozugbo emere mkpebi ahụ, gịnị ka m ga-eme.
Ọ dị mma, gịnị ka m ga-eme tupu m kpebie ịzụ ụmụ nkịta m?
Tupu ị zụọ nkịta, ịkwesịrị ikpebi ma nkịta ahụ ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ịzụlite.
Nke mbụ, ọ dịghị anụ ọ bụla kwesịrị ịzụ tupu afọ abụọ eruo. Ha etozubeghị oke oke. Ha ka ha tolite ma tolite tupu ha agabiga nsogbu anụ ahụ nke ịzụlite, bu ebu, na nkịta nkịta. Nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu, n'ihi na ị ga-arụsi ọrụ ike n'ime afọ abụọ ahụ.
Nkịta gị ga-anọ na nkwadebe maka ozuzu afọ abụọ mbụ nke ndụ ya. Ihe ọ bụla ị na-emere ya, gụnyere inye ezigbo nri na ahụike, ọzụzụ nrubeisi, igosi, ịrụ ọrụ, na ihunanya ga-eme ya ka ọ bụrụ nne kacha mma ma nyere ya aka ịwepụta mkpofu ahụike ka mma.
Enwere m ike ịhụ ihe kpatara nri na nlekọta ahụike ji bụrụ mkpa dị mkpa, mana olee otu ihe ndị ọzọ si mee ka ọ bụrụ ezigbo nne na nna?
Ha niile dị mkpa n'ụzọ dị iche iche. Ihe kachasị mkpa bụ nke ikpeazụ. Ime ime, nnyefe, na ịzụ nwa nkịta na-enwe nkụda mmụọ na nkịta na ịmara na ị hụrụ ya n'anya na-eme ka ọrụ ya dị mfe.
Otu ihe, ọ ga - atụkwasị gị obi na ị ga - enyere ụmụ nkịta aka, kama iche na ọ dị ya mkpa ịgbachitere ha. Ọzụzụ nrube-isi na abata n'ime ụzọ ndị kachasị ịtụnanya. Oge ụfọdụ ụmụ nwanyị na-echegbubiga onwe ha ókè mgbe ụmụ nkịta ọhụrụ ha malitere ịkwa ákwá: inwe ike idobe ya ka ọ daa ala ka ọ na-enye ha ohere ịnweta ihe ha chọrọ (nri!) Ga-enye gị udo nke uche dị ukwuu. Ihe ndị a bụ ole na ole n’ime ihe mere nkwado a niile ji dị mkpa.
Ọ dị mma, mana kedu maka igosi na ịrụ ọrụ, kedu ka ndị ahụ ga-esi nwee mmetụta ọ bụla na agwa ya dịka nwa anọdụ?
E nwere ihe abụọ mere o ji bụrụ na otu nwanyị na-azụ ụmụ nwanyị “ga-apụ n'ụlọ.”
Nke mbụ, ọ ga-abụ nkịta na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ọ nwere ihe omume na ndụ ya wee soro gị na-aga ebe ma na-eme ihe na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na ọ na-enwekwu obi ụtọ, ọ ga-abụ nne ka mma. Ọ dị mfe.
Nke abuo, ikwesiri inwe uzo isi mara na uzu gi kwesiri ozuzu. Nke ahụ na-ada ụda ikpe, mana m ga-echetara gị na anyị na-atụle ozuzu ọrụ ebe a. Nke ahụ pụtara na anyị na-azụ anụ ka ìgwè dị mma.
Zọ kachasị mma iji hụ na ị na-emezi ụdị ahụ bụ naanị ụmụ anụmanụ nwere ụdị anụ ọhịa na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nwere anya iji belata mmejọ na iwusi ezigbo agwa ike. Anyị ga-atụlekwu banyere ịhọrọ nkịta stud mgbe e mesịrị, agbanyeghị, ị ga-ahọrọkwa broch brood gị. Ọ bụrụ na ị na-amalite nkịta mbụ gị, ị ga-ele anya ya ogologo ma sie ike na ya ma kpebie ma o kwesịrị ntozu ozuzu. Nke a enweghị ihe ọ bụla gbasara otu ị hụrụ ya n'anya - n'ụzọ doro anya, ị na-eme - nke a metụtara ịme ka ìgwè ahụ ka mma.
Nke a nwere ike ịbụ mkpebi siri ike ime mgbe obi gị metụtara. Obi na-eme ka anyị hụ ọhụụ ka e wee belata mmejọ ma mee ka àgwà ọma ka mma. Nke a bụ ebe echiche nke ịnwale na ịnwale ụmụ anụmanụ anyị sitere. Ihe omume ndị a na-enye anyị echiche ka mma banyere ma nkịta anyị tozuru ozuzu.
Mana, buru n’obi, onye ọ bụla nwere ụkpụrụ nke aka ya na ha agaghị ekwenye. Peoplefọdụ ndị agaghị amụ nwa bekee ruo mgbe ọ bụrụ Onye Ọchịchị na mgbanaka ngosi. Fọdụ ndị anaghị ewere nkịta nwanyị kwesịrị ka a zụlite ruo mgbe ọ nwetara aha Nna-ukwu Hunter ma ọ bụ aha Utility Dog ya. Kwesịrị ịme mkpebi ndị a n'onwe gị, na-eburu n'uche echiche nke ime ka ìgwè ahụ dịkwuo mma.
Ma ọ dịkarịa ala, ị kwesịrị ị na-enyocha ya ọzọ, anya abụọ ihe ọmụma karịa. Onye na-azụ ya ga-abụ nhọrọ dị mma, agbanyeghị, ọ gaghị ekwe omume mgbe niile. Ọ bụla nwere ahụmahụ breeder gị akpan akpan ìgwè ga-enwe ike inyere gị aka inyocha gị Anụọhịa n'eziokwu na-enweghị ndị rosy mgbukepụ nke ịhụnanya na-agbanwe gị n'ọnọdụ.
Ọ dị mma, enwere m afọ ojuju na ọ bụ nwanyị nwere mmụọ dị mma, tozuru ozuzu, kedụ nzọụkwụ ọzọ?
Jide ebe ahụ! Ọ bụghị ngwa ngwa! Nke a bụ usoro dị ogologo, cheta? O nwere ihe ọzọ mere ị ga-eji chere ruo mgbe nkịta ọhịa gị gafere afọ abụọ. Nlekọta Ahụike! Ọ ga-adị mkpa ka ị nyochaa ahụike dị iche iche iji chọpụta ma nkịta gị ga-eri nri.
Nlekọta ahụike dị mkpa dị iche site na ụdị ka ị zụlite ma ị kwesịrị ịkpọ akwụkwọ dị mma na ụdị gị ma ọ bụ onye maara ihe na-azụ ihe iji chọpụta ụdị ule ị ga-eme.
Ọnwale ndị a na-ahụkarị bụ:
Nkwonkwo : Nwee x-ray onye na-agwọ ọrịa anụmanụ nke nkịta gị, ikpere ma ọ bụ nkwonkwo ndị ọzọ ma nyefee ụzarị ọkụ ahụ na OFA (Orthopedic Foundation for Animals) maka nyocha. Ọ bụrụ na a na-atụle hips nke nkịta gị Ezigbo, Ezigbo, ma ọ bụ magburu onwe ya, nkịta gị dị mma ma nwee ike ịzụ ya.
Ọ bụrụ na etinyere ha na dysplastic, biko soro onye na-elekọta anụ ụlọ gị kwurịta nchoputa a wee kpuchie nwanyị gị ozugbo enwere ike. Hip Dysplasia bụ nkwarụ nkwonkwo na-egbu mgbu nke a na-agwọ n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụ ihe nketa na ọ dịghị nkịta na-dysplastic kwesịrị ịzụ.
Anya : N’ọtụtụ ụdị, ụdị ọrịa a na-akpọ PRA (Progressive Retinal Atrophy) bụ nnukwu nsogbu. Otu onye na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ nwere ike ịlele anụ ụlọ gị ma hụ na ha dị mma. A ga-anwale ule a kwa afọ.
Ebe ọ bụ na PRA bụ ọrịa na-aga n'ihu, nkịta nwere ike ịdị mma otu afọ ma gosipụta mgbaàmà na-esote. Enwere ike izipu nyocha anya na CERF (Canine Eye Registry Foundation) maka asambodo a ga-emegharị kwa afọ. E nwere ọrịa anya ndị ọzọ (dịka cataracts) nke ụdị anụ dị iche iche jikọtara ọnụ; ọ ga-adị mkpa ka ị mee nchọnchọ iji chọpụta ihe dabara adaba maka ụdị anụ ụlọ gị.
Ndị ọzọ : Gị ụdị nwere ike nke ya mkpụrụ ndụ ihe nketa oge bọmbụ. Ọ ga-adị mkpa ka ị nyochaa ụdị ìgwè gị iji mara ụdị nnwale ị ga-eme tupu ị tụlee ịzụlite azụ gị.
Brucellosis : Nke a bu oria ojoo ojoo nke nwere ike ibunye ya n'uzo ndi ozo. Ọbụna nkịta na-amaghị nwoke ma ọ bụ nkịta na-amaghị nwoke kwesịrị ịnwale tupu ozuzu. Imirikiti ndị nwere nkịta na-achọ nyocha brucellosis na-adịbeghị anya tupu ikwe ka ozuzu. Ha ga-anwale nkịta ha n'ime ọnwa isii gara aga. Ọ bụrụ na ha anwalebeghị nkịta ha n'ime ọnwa isii gara aga, jụọ ha ka ha mee ya tupu ha azụọ azụ gị!
Ikwesiri ịchọ otu ụdị nyocha ahụ site n'aka onye nwe nkịta ụlọ yana ịnye ha ya. More na ịhọrọ nkịta stud, n'okpuru.
Họrọ ụgbụ maka ebe ị na-ekpofu ihe dị ka mkpebi dị mkpa dị ka ịhọrọ akpa gị. Needkwesịrị itinye oge na mgbalị na mkpebi a. Nke a bụ ezigbo oge iji nweta ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọkachamara.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ị ga-akpọtụrụ onye na-azụ nkịta gị ma rịọ ha ka gị na ha nọrịa oge ụfọdụ ka ị gafere nhọrọ dị iche iche ka ị ghọta ihe kpatara otu nkịta ji aka gị mma karịa nke ọzọ. Ọ bụrụ na onye na-azụ gị ma ọ bụ ọkachamara ọzọ adịghị adị ka gị na ya nọrọ oge ụfọdụ, mgbe ahụ ị ga-eme nyocha ahụ n'onwe gị ka ị nwee ike ịme mkpebi maara ihe.
Ihe mbu ichoro ime bu iwere ozi nke ichotara kemgbe otutu afo banyere nkita gi ma nyochaa ike na adighi ike ya. Ọ nwere akara adịghị ike dị elu mana ọ dị mma n'ihu? Olee otú azụ ya angulation? Kedu maka udiri uwe ya? Obi ya? Nwere ike ịhụ mara ihe kpatara ịpụ nkịta gị na igosi na / ma ọ bụ rụọ ọrụ ya nwere ike inye aka na usoro a.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe na-arịa gị nkịtị, ị maghị ihe ịchọrọ idozi na ọgbọ na-abịa. Ma, nke ahụ bụ n'ezie ihe ị na-achọ ime - melite ụdị ahụ site na imeziwanye na bitch gị. Ya mere, jiri obi ọjọọ gwa onwe gị eziokwu. Know maara na ị hụrụ n'anya ụfụ gị, nke ahụ abụghị ajụjụ ebe a, mana ọ bụrụ na ịnweghị ike ikwu eziokwu banyere mmejọ ya, mgbe ahụ ị nweghị ike idozi ya n'ọgbọ n'ọdịnihu.
Ga-achọ ilekwasị anya na otu, ma eleghị anya abụọ, nsogbu ị ga - achọ ịhụ ka mma ma chọọ nkịta stud nke siri ike na mpaghara ndị ahụ na - adighi ike na mpaghara ọzọ. Ọ nwere ike bụrụ ihe ngbanwe siri ike - n'ezie, na-enweghị nkwa ị ga-aga nke ọma.
Enwere isi okwu abuo na ozuzu nke ichoro ighota. Nke mbụ bụ ihe kachasị mfe: ozuzu ịmasị ihe na-amasị ya. Nke a pụtara na ị ga-ewere ihu ọma nke nkịta ahụ wee chọta nkịta stud nke na-aja mma ya. Usoro iwu nke a bụ na ọ bụrụ na ị zụlite dịka ịmasị, ị ga-adị ka.
Secondzọ nke abụọ ị ga-esi bịaruo ozuzu na-agbagwoju anya. A na-akpọ ya ịzụlite akara. Ọ gụnyere ịtụle pedigrees nke nkịta gị na nkịta nwere ike ịhọrọ egwuregwu dị mma. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi bịaruo ozuzu ahịrị. Nke mbu, ikwesiri ighota otutu okwu.
Line ozuzu yiri ozuzu ka-amasị naanị kama na-achịkọta myirịta, na ị na-achịkọta mkpụrụ ndụ ihe nketa nke a akpan akpan nkịta. Inbe ozuzu bụ ahihia ozuzu oke. Mgbe ị na-amalite ozuzu, ịchọrọ ịhapụ ịkpa ozuzu ka ọ bụrụ ihe dị ize ndụ belụsọ ma ị nwere ntụkwasị obi nke usoro ọmụmụ ahụ.
Typedị ikpeazụ nke usoro ọmụmụ-esemokwu bụ ihe karịrị akarị. Otu ozuzu oke ga-enwe usoro ọmụmụ ebe enweghị nkịta, ma ọ bụ opekata mpe,. Nke a na-eme mgbe ị na-azụlite dị ka amasị. Imirikiti ndị na-azụ ihe na-eme ụdị ụfọdụ nke ịzụlite ahịrị, na-elekwasị anya n'otu n'ime studs dị mkpa na ụdị ha.
N'ezie, ịchọrọ ijide n'aka na nkịta ị na-etinye uche na ya kwesịrị nsọpụrụ. Ọ bụrụ na ị kwụkwasị na nwa na mediocre nkịta - ma ọ bụ nkịta nwere nsogbu ahụike - ị ga-enweta ihe ị rịọrọ. Typedị ozuzu a dị aghụghọ karị ma ịchọrọ ijide n'aka na ị jiri nlezianya nyochaa nkịta na usoro ọmụmụ gị ka ị mara ebe ị ga-achọ ịga na ozuzu ahịrị.
Na omume, ikekwe ị ga-achọ iji usoro abụọ a mejupụtara. Ga acho inweta ihe omumu nke na - ekele nkpuru gi na nkita nke dikwa aru. Ọzọ, nke a bụ ezigbo ezigbo oge iji chọọ ndụmọdụ nke ndị na-azụ ihe ọmụma.
Họrọ nkịta ọkpọ bụkwa ezigbo ihe kpatara ị ga-eji na-eme ihe omume nke ìgwè ahụ mgbe nwa gị na-eto eto. Nke a ga - enyere gị aka ịmata nkịta nkịta dị iche iche tupu nkịta abịa n’oge.
Ozugbo i wedata nhọrọ gị ruo mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ nwere ike ịbụ ndị na-aga ime, ị ga-achọ ịkpọ ndị nwe nkịta stud wee gbaa ha ajụjụ maka nkịta ha. Ọtụtụ stud nkịta nwe ga-eme ihe n'eziokwu na ị banyere ihe nkịta ha na-amị, ha na ike na adịghị ike, na ihe ị pụrụ ịtụ anya. Ọ bụrụ na ha anaghị abịa maka nsogbu yana uru nke nkịta ha, ị kwesịrị ị zụrụ ha.
N'oge ụfọdụ na usoro ahụ, ị ​​ga-eme mkpebi banyere nkịta ga-akacha mma maka nsị gị. Ọ dịghị onye nwere ike ịme gị mkpebi a mana ọ bụrụ na ịmechara ihe omume ụlọ akwụkwọ gị wee mee onwe gị eziokwu n'eziokwu banyere nkịta gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịchọta nkịta dakọtara.
Mgbe ahụ ị dịla njikere ịbanye mkpụrụ ndụ ihe nketa na-akụpụ ma hụ ihe ị nwetara. N'ihi na anyị amachaghị ihe gbasara mkpụrụ ndụ ihe nketa dị mgbagwoju anya na nkịta anyị, ị na-agbapụ n'ọchịchịrị. Ọbụna onye na-azụ ihe nwere ahụmahụ na-emehie ihe - ọ bụ ya mere ị ga-eji kpachara anya na nyocha nke ọma na nyocha gị.
Ozugbo mkpebi gị mere, ị ga-achọ gwa onye nwe nkịta stud banyere oge ị na-atụ anya ka nkịta gị ga-abịa n'oge ka ha nwee ike ịme atụmatụ nke ha. Nwere ike ịchọrọ ịbịara nkịta gị na nkịta nkịta n'ime izu mbụ nke oge ya ka o wee nwee oge iji imeghari na gburugburu ọhụụ ya tupu a zụọ ya.
Debe ozi ndị a na faịlụ maka obere bit / litter ọ bụla ị mepụtara:
Aha nke nkita
Nọmba Litter (ụzọ dị iche na etiti ụlọ mposi)
Itinye ụbọchị na nsonaazụ
Testbọchị nnwale na progesterone
Bọchị ozuzu na ikwu maka ozuzu
Oge Palpitation na nsonaazụ
Ultrasound ụbọchị na nsonaazụ
Bọchị X-ray na nsonaazụ
Ihe edeturu na afọ ime
Sochie uru uru kwa izu
Sochie okpomọkụ site na ụbọchị 58-65, ugboro 3 kwa ụbọchị
Datebọchị na oge ịgba mgba bidoro
Datebọchị na oge ịgba mgba mechara
Ihe edeturu na whelping
Akwụkwọ edemede (dị ka AKC chọrọ)
Aha njirimara na nọmba AKC nke mgbochi mmiri
Aha e debara aha na nọmba AKC nke sire
Aha onye nwe Sire
Litbọchị-awụba n'oké osimiri whelped
Onu ogugu umuaka nwoke amuru
Ọnụ ọgụgụ ụmụ nkịta a mụrụ
AKC Litter Nọmba
Mmekọahụ, Agba / akara, Puppy ID, ụbọchị ere, ụbọchị nwụrụ, aha na adres nke onye rere, atesbọchị mgbe enyere akwụkwọ: enyere akwụkwọ ndebanye aha ma ọ bụ asambodo na akwụkwọ ire ere; aha na akara AKC nwa nkita.
Oge a mụrụ nwa nkita ọ bụla
Agba eriri ma ọ bụ akara njirimara ndị ọzọ
Agba nke nwa nkita
Ibu ibu n'afọ
Ogologo na ọmụmụ
Nkọwa nke nsogbu ọ bụla
Sire na Dam
Oge whelping malitere na-agwụ
AKC Ndebanye aha #
Ibu arọ na mgbe a na-ere ya
Acgba ọgwụ mgbochi nyere (Datebọchị na )dị)
Onye nwe ya (gụnyere adreesị na akara ekwentị)
Ọnọdụ nke ire ere
Ihe edeturu na mmepe na obi
Na azụ nke ụdị a, soro arọ nke puppy kwa ụbọchị ruo mgbe ha dị izu atọ ma mesịa kwa izu.
Ngwa Ndebanye aha Litter
Kpọtụrụ AKC ma rịọ ụdị a. Ozugbo puppy na-whelped, mezue a ụdị na nwere nkịta nwe nwe banye n'ụdị. Zipu mpempe akwụkwọ edechara iji ego kwesịrị ekwesị gaa AKC. Ọ dị mma iziga envelopu zoro ezo nke onwe ya na ngwa ahụ na onye nwe nkịta stud ka ha wee zigara ya AKC n'egbughị oge.
AKC ga-anata akwụkwọ ndebanye aha nke Litter n'ime ọnwa isii site na ụbọchị ngagharị iji debanye aha ụmụ nkịta na AKC. Agbanyeghị, ịkwesịrị itinye akwụkwọ a ozugbo a ga - emegharị puppy ka ị nwee ike inyefe ndị na - azụ puppy n’ezie akwụkwọ mgbe ha buliri nkịta ha.
Nwa nkita nwa akwukwo
Maka nwa nkita ọ bụla edepụtara na Ngwa Ndebanye aha Litter, ị ga-enweta akwụkwọ ndebanye aha iji nye ndị na-azụ puppy ka ha nwee ike ịdebanye aha ụmụ nkịta ha na AKC. Teknụzụ, onye na-azụ nwa nkịta nwere ike ịkọ nkịta nkịta ihe ọ bụla ha chọrọ. N'ezie, ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-ekwusi ike na aha ụlọ aha ha bụ okwu mbụ na aha nkịta. Tụkwasị na nke a, ụfọdụ ndị na-azụ ihe nwere isiokwu maka akwụkwọ ha ma chọọ aha nwa nkịta ahụ dabara na isiokwu ahụ. Mee ka ihe ọ bụla pụrụ iche chọrọ nye ndị na-azụ ya tupu oge eruo ka ha nwee ike wepụta aha kwesịrị ekwesị maka nwa nkịta ha.
Họrọ nkịta nkịta gị tupu oge eruo. Mee ka onye nwe nkịta ụlọ ọrụ mara mgbe ị na-atụ anya ka nkịta ọhịa gị na-abịa n'oge. Ha ga-eme ka ị mara maka ihe ọ bụla ha chọrọ.
Ga-ahọrọkwa nkwado ndabere, ọ bụrụ na nhọrọ nke mbụ gị adịghị
Mee ka onye na-agwọ ọrịa anụmanụ nyochaa gị nke ọma iji hụ na ọ dị mma. Gbalịa mee brucellosis ule.
Ozugbo ị hụrụ akara izizi nke nkịta gị ịnọ na oge, kpọtụrụ onye nwe nkịta stud. Ọ bụrụ na nkịta nkịta gị na-anọghị na mpaghara, ị ga-achọ ịkọwa ndokwa mbupu n'oge a ka ị nwee ike ịme ndokwa niile dị mkpa.
Ọ bụrụ na nke a bụ azụ azụ izizi gị, ị ga-achọ ịmata mgbe ọ dị njikere ịzụ ya. Hụ dibịa anụmanụ gị gbasara smears na / ma ọ bụ nyocha progesterone. Nke a ga - enyere gị aka ịkọwa oge kwesịrị ekwesị iji mee ka nkịta gị gaa nkịta nkịta. Nke a ga - abụrịrị ụbọchị 10 na 15 mana ọ nwere ike ịbụ tupu ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Ga-achọ ịtọọ oge brucellosis ule ka nsonaazụ ga-adị ugbu a maka onye nwe nkịta stud.
Mgbe Anụọhịa dị njikere
Kpọtụrụ onye nwe nkịta stud wee mee ka ha mata mgbe na otu nkata ga-abịarute.
Ọ bụrụ na ị na-ebu ebu nkịta, onye nwe nkịta stud ga-eburu nkịta ahụ na ọdụ ụgbọ elu ma chọọ ozi niile. Ikwesiri iziga akwukwo akwukwo nile na ahihia. Nwere ike ịdekọ envelopu na crate.
Ọ bụrụ na ị na-anapụta nkịta ahụ n’onwe gị, nweta ezigbo ụzọ ma weta akwụkwọ edemede gị niile.
Mgbe anwu biara ulo
Anụọhịa gị ga-anọnyere onye nwe nkịta stud maka otu izu ma ọ bụ abụọ.
Mgbe anara gi batara ulo, ikwesiri inwetara ya akwukwo site na onye nwe nkita ya, ya na nkwekorita, nkpachapu nke ihe nkita nke nkita, nkita nke nkita, na ihe omuma banyere mgbe anwuru anu.
Ọganihu nke PUPPIES
2 cell ẹmbrayo nọ na oviduct
Embrayo ahụ anaghị anabata nnyonye anya dị na mpụga na mmepe
Mgbanwe dị na nsị
Ọrịa nwere ike ịbụ ụtụtụ
Omume ndị mmadụ nwere ike ịgbanwe
Omume nkịtị - ọ bụrụ na ọ naghị emega ahụ tupu ime ime, ọ kwesịrị ịmalite ịme mgbatị ahụ kwa ụbọchị
Lelee ọgwụ na ọgwụ niile na vet tupu ị nye ha
Enweghị ọgwụ ahụhụ (ya bụ, ọgwụgwọ flea)
Enweghị ọgwụ mgbochi ndụ
Tinye ọnụ na ebe a na-ekpofu nri
Kpọtụrụ AKC maka ngwa ndebanye aha
Bido iwe were nwa nkita
Izu Abụọ (aysbọchị 8-14)
Embrayo ga-abụ mkpụrụ ndụ anọ n’isi izu yana sel 64 n’izu
Embrayo na-abanye n’akpa nwa
Gaa n'ihu dika Izu Otu
Ọ dịghị ihe pụrụ iche n’izu a
Izu nke Atọ (aysbọchị 15-21)
19bọchị 19 - Nbanye nke embrayo na akpanwa
Izu nke Anọ (aysbọchị 22-28)
Mmepe anya na ọgidigi azụ
Nwa ebu n'afọ na-eto site na 5-10 mm ruo 14-15 mm
Organogenesis bidoro- Embrayos nwere ike ibute nkwarụ
26bọchị 26 - 32 bụ ụbọchị kachasị mma iji palpitate (ya bụ, obi ụmụ nkịta)
Enwere ike ikpochapụ mmamiri
Mmepe Mammary malitere
Mgbe ụbọchị nke iri abụọ na isii gachara, palpitation nwere ike ime iji chọpụta ime afọ ime
Debe ọrụ siri ike (dị ka ịrụ ọrụ, ịwụli elu, ogologo ọsọ)
Add 1/4 iko chiiz ma ọ bụ akwa sie sie nri na ụbọchị ọzọ
Hazie ultrasound ma ọ bụ palpitation na vet ma ọ bụrụ na achọrọ
Izu ise (ụbọchị 29-35)
Mmepe mkpịsị ụkwụ, mkpịsị osisi, na mbọ
Nwa ebu n’afọ di ka nkịta
Enwere ike ikpebi ihe gbasara nwoke na nwanyị
Anya (emeghere na mbụ) ugbu a
Nwa ebu n’afọ na-eto site na 18 mm - 30 mm
Organogenesis na - agwụ - embrayo na - eguzogide ugbu a na nnyonye anya na mmepe
Ọzịza ahụ na-apụta ìhè
Loss nke 'tuck-elu'
Ibu ga-amalite ịbawanye
Ubé mụbaa ego nke nri na ịgbanwee gaa na puppy kibble. Ọ bụrụ na ị na-eri otu nri kwa ụbọchị, tinye obere nri. Ọ bụrụ na ị na-eri nri ugboro abụọ n’ụbọchị, mụbaa otu n’ime nri.
Tinye kwa vitamin dị iche iche kwa ụbọchị maka nkịta
Palpitation agaghịzi ekwe omume n'ihi mmiri mmiri dị n'ime akpanwa
Izu isii (36bọchị 36-42)
Development nke akpụkpọ ink
Nwa ebu n’afọ kwesịrị ịtụ ihe dị ka gram isii ma buru 45 mm n’ogologo
Enwere ike ịnụ ụda obi nwa ebu n'afọ site na stethoscope
Iburu ara gbara ọchịchịrị ma gbasaa
Iberibe na-ebuwanye ibu
Tinye cheese cheese ma ọ bụ akwa sie sie nri kwa ụbọchị
Mee ka nri dịkwuo na nri nri
Bitch kwesịrị ịmalite ihi ụra na igbe whelping
Chikọtanu whelping igbe
Site na oge a kwesiri ikwusi ike na umu anoo ahihia di ime. Gwa ndị nọ na ndepụta nwa nkita gị. Mee ka ha mata mgbe ị tụrụ anya mbuga gị.
Izu Asaa (aysbọchị 43-49)
Uto na mmepe na-aga n'ihu
Isi ntutu afọ ga-amalite wụsara
Anụọhịa ahụ ga-amalite ile anya dị ime n’oge a
Dịtụ mụbaa nri abụọ
Kwụsị ụlọ ọ bụla na-adịghị mma ma ọ bụ na-awụli elu
Radiographs (X-ray) enwere ike iji chọpụta ọnụọgụ na ogo ụmụ nkịta
Izu asatọ (aysbọchị 50-57)
Nwa ebu n’afọ nwere ike ịchọpụta mgbe anachị na-ezu ike
Nwa nkịta nwere ike ịmụ nwa n'enweghị nsogbu site ugbu a gaa n'ihu
Enwere ike ịmịpụta mmiri ara site na ọnụ ara
Anụọhịa ahụ ga-adị nnọọ ukwuu.
Tinye nri ehihie na-adịghị mma
Chịkọta ngwongwo whelping (lee n'okpuru)
Kwadebe ndepụta ekwentị maka enyemaka / nkwado. O kwesịrị ịgụnye nọmba ekwentị gị, nọmba ekwentị ụlọ ọgwụ mberede, ọnụọgụ ndị enyi ọ bụla ga-enye nkwado n'oge ịgba mgba, yana onye ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịkpọtụrụ tupu, n'oge, ma ọ bụ mgbe emechara (dịka ọfịs gị iji mee ka ha mara ị gaghị abata!)
Jide n'aka na ụgbọ ala gị nwere gas ma dị njikere maka njem mberede na-aga n'ihu na ọfịs vet.
Izu nke itoolu (ụbọchị 58-65)
Akwu omume nwere ike hụrụ
Bitch nwere ike inwe nkụda mmụọ (pịgharịa, pacing, eme iru ala)
Okpomọkụ kwesịrị ịdị gburugburu 100.2-100.8 degrees Farenheit
Mgbe ọnọdụ okpomọkụ gbadara gburugburu 98-99.4 degrees Farenheit, a ga-amụ ụmụ nkịta n'ime awa 24
Agụụ nwere ike ịkwụsị ka whel na-eru nso
Malite ịmị ọkụ ugboro atọ n'ụbọchị
Gwa onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ ụlọ ọgwụ mberede mgbe ọnọdụ okpomọkụ dara ka ha wee dịrị njikere ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọ bụla
Debe ndekọ zuru ezu na ọnọdụ okpomọkụ na omume nke anụọhịa
Ugboro abụọ ego na whelping onunu dị njikere
Gbaa mbọ hụ na nwa nkịta ọ bụla na - enweta ụyọkọ anụ (obere mmiri ara ehi mbụ) n’ime awa iri abụọ na anọ. A na-ejikwa ọgwụ nje mee ka colostrum jupụta puppy puppy from disease. Ọ na - enyere aka mee ka ha ghara ịnabata nri.
Lochia (nhichapụ nke nwanyi) kwesịrị ịcha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị mma na ụbọchị mbụ). Ọ bụrụ na ị hụ ọpụpụ ojii, kpọtụrụ onye na-agwọ ọrịa gị ozugbo!
N'ime oge 5-6 nke ọmụmụ nwa nkịta ikpeazụ, were nkịta na puppy na vet maka nyocha. Anu anumanu a ga achota na nkita anagideghi umu nkita obula ma obu placentas na umu nkita di ezigbo mma. Jụọ onye na-elekọta anụ ụlọ ka ọ lelee ụmụ nkịta maka okpokoro okpokoro na nhọrọ ndị dịnụ. Nleta nleta a bụ ihe ekwesighi ịwụli. Ọ bụrụ na anụọhịa ahụ jigidere placenta ma ọ bụ nwa nkita, ọ nwere ike ibute ọrịa siri ike nke nwere ike igbu mmadụ.
Mee ka ụgbọ ala gị dị njikere ma ọ bụrụ na ị ga-eme njem ngwa ngwa gaa n'ọfịs vet. Dị ka o kwesịrị, ị ga-enwe onye ị ga-anya mgbe ị na-anọdụ ala na bitch. Were ụfọdụ akwa nhicha n'ihi na ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka anụ ọhịa ahụ na-amalite inyefe ya na ngagharị nke ụgbọ ala ahụ. Should kwesịrị ichebe kapeeti ụgbọ ala gị ma ọ bụ ihe mkpuchi ya na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ blanket nwere ike ịsacha.
Jide n'aka na ụgbọ ala ahụ nwere gas ma kwadebe ịga. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme njem ahụ, ị ​​gaghị achọ igbu oge maka ihe ndị dị otú ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị onye ọ bụla ị ga-enyere aka na ịnya ụgbọ ala, gbaa mbọ hụ na ị nwere nnukwu igbe iji nwee nkenke na nkịta ọ bụla a mụrụ na njem ahụ.
Igbe nke nwere okpukpu buru ibu nke anakpo ga-agbatị nke ọma. Ya na pups ahụ ga-ebiri n’ime igbe izu ole na ole ndị mbụ. Igbe whelping kwesiri inwe ugboala nche (nke a na-akpokwa rails pig) nke si na akuku chebe umu nkita na nne ha na-agagharị n'elu ha. Ogologo igbe ahụ ga-adabere na nkịta gị.
Debe ezigbo akwụkwọ akụkọ na aka iji kwụnye igbe whelping n'oge mgbatị ahụ. Ka akwụkwọ akụkọ ahụ na-emebi, ị nwere ike itinye akwa ọhụrụ ma hichaa ihe niile mgbe whelping gafere.
Jide mkpofu ahịhịa n'aka iji mee ihe n'oge whelping na ka ụmụ bekee na-etolite. Tụkwasa m obi - puppy are imetsi!
Ga-achọ igbe dị ntakịrị n’aka iji tinye ụmụ nkịta ahụ mgbe mama na-anapụta nwa nkịta ọzọ. Chọghị ka ụmụ oyi na-atụ oyi ka ị gbanye ya na akwa nhicha ma debe ya n'akụkụ ebe ọkụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ tinye ihe mkpuchi kpo oku n'okpuru akwa ahụ. Otu nkata akwa dị ọcha na-arụ ọrụ nke ọma maka nke a - ọ dịkwa mfe iburu mgbe ịchọrọ ịkpọrọ pups ahụ na vet maka nyocha mbụ ha.
Nkọ Safety Sharis
Maka igbutu eriri nwa.
Ndenye Kwụsị ntụ ntụ
Iji kwụsị ọbara ọgbụgba, ọ bụrụ na enwere, mgbe ịchachara eriri nwa.
Maka nhicha eriri eriri eriri ọgwụgwụ mgbe ebipụ.
Maka ikpuchi eriri eriri nwa tupu ịkpụ ya. Nwere ike iji abụọ were dọka ụdọ ahụ dị ka ihe ọzọ iji belata ya. Nke a na-enyere aka igbochi ọbara ọgbụgba.
Maka ijigide eriri nwa ahụ mgbe ị bechara ya.
Jiri ma ọ bụrụ na ị ga - enyere aka ịnapụta ụmụ nkịta.
Maka ịlele okpomoku ahu na ubochi tupu oge ruru.
Maka inyere aka kpochapụ ụmụ nkịta amụrụ site na nsogbu.
Mụ nkịta na-adịkarị ka ọ na-abịa n'etiti abalị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ nkịta gị pụọ n'èzí, ị ga-elegide ya anya. Igwe ezigbo ọkụ ọkụ ga-eme ka ọ dị mfe.
Lash na akwa akwa akwa
Otu ihe mere dị ka n'elu. Ọ bụrụ na ị kpọpụta ya na ọdụm, ọ ga-abụ na ọ ga-apụ n'anya n'akụkụ gbara ọchịchịrị ma hapụ nwa nkita ebe ahụ n'amaghị ama.
Maka oge mgbapu na oge n'etiti ụmụ nkịta.
Maka ndekọ ndekọ. Mpempe akwụkwọ nkịta ndị a kpọtụrụ aha na mpempe akwụkwọ ndekọ ihe ndekọ ga-arụkwa ọrụ.
Maka ịchọpụta ụmụ nkịta. Jide obere ihe na-enweghị isi mgbe ị na-enyocha ha ma tụọ ha mgbe amụrụ gị.
Maka itu ụmụ nkịta na mgbe a mụrụ ha ma kwa ụbọchị.
Microwave Okpomọkụ Kedo akwa
A na-eme ka mpempe akwụkwọ ndị a na-ata mmanụ na microwave maka nkeji 5-7 ma na-ekpo ọkụ ruo ihe dị ka awa 12. Ebe ọ bụ na ha anaghị eji ọkụ eletrik, ha dị nchebe karịa nhọrọ ochie nke oriọna na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe mkpuchi kpo oku. Otu akara aha maka ndị a bụ Snuggle Safe Heat Pad.
Ọ bụrụ na ihu igwe dị ezigbo ọkụ, ị kwesịrị idobe onye ofufe na aka. Nke a bụ maka nne karịa ụmụaka. Etinyela onye ofufe elu ka ọ fụọ ozugbo na pups ahụ kama ịkwaga ikuku n'ofe igbe whelping. Ọ bụrụ na nne na-atụ ọtụtụ mmiri n’ụgbọ wheliki ozugbo ọ gwụchara ma zuru ike, dobe fọọlụ ahụ ka o nwee ike ịjụ oyi ma gwọọ ụmụ nkịta ahụ.
Whelping Box pad ma ọ bụ blanket
Ọ bụ ezie na pups ka nọ na igbe whelping, ị ga-edebe blanket ma ọ bụ pad na igbe ha. A ga-agbanwe pad a ugboro abụọ n'ụbọchị ma ọ bụ karịa, dabere na etu mmiri mmiri ahụ si eme ka mmiri dị ọcha mgbe pups ahụ gasịrị. Otu mpempe ajị anụ na akwa nhicha ahụ a na-adụ n'azụ nke hà ka igbe whelping na-eme akwa akwa. Enwere ike ịsacha ha ma gbanye ha ọcha iji mee ka ha dị ọcha. Inwe ihe anọ n’aka ga-eme ka ị ghara ịsa akwa na-aga n’ihu. Etinyela mpempe akwụkwọ ndị a n'ime igbe whelping ruo mgbe whelping ahụ gafere.
Ọfọn, ọ bụ oge ngosi! Anụọhịa gị dị njikere ma, olile anya, yabụ gị! Ozi dị n'okpuru bụ maka whelping nkịtị. Ọ bụrụ na ahụmịhe gị gbanwere ọtụtụ ihe na nkọwa a, mgbe ahụ ị kwesịrị ịkpọtụrụ onye na-elekọta gị. Lay igbu oge na-achọ enyemaka nwere ike itinye ihe nkịta na / ma ọ bụ nkịta gị nwere nsogbu. Nke a bụ n'ezie oge icheta '' nchekwa dị mma karịa mwute. ''
N’ụbọchị nke 58 mgbe anụchara ozuzu mbụ, ị ga - achọ bido iwere okpomoku gị ugboro atọ n’ụbọchị. A bitch okpomọkụ ga-ada site na gburugburu 101.4 ka 99 degrees Fahrenheit ma ọ bụ n'okpuru awa ole na ole tupu ọ dị njikere whelp. Mgbanwe nke ọnọdụ okpomọkụ dị nnọọ mma, ihe ị na-achọ bụ ọdịda dị egwu karịa n'okpuru 99F.
Ọnọdụ okpomọkụ bụ ihe kachasị mma nke whelping na-abịanụ. Ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke ịsọ mpi na-abịanụ bụ erughị ala, ahụ erughị ala, ịkwa ụra na ileba anya. Anụọhịa nwere ike jụ nri tupu whelping nakwa. Ikekwe ọ ga na-eku ume ọkụ ọkụ.
Ihe ndị a niile bụ ihe ịrịba ama na whelping dị nso. Kpọọ dibia anumanu gi ma mee ka ha mata na whelping ahu amalitela ka ha di njikere iza ajuju obula ma obu nye ndumodu ma oburu na inwere nsogbu. Anụọhịa ahụ ga-ebido ịmanye na ịmịchalụ ya oge ụfọdụ wee nwee ike ịmalite igwu ala na akwa ụra.
Ọ ga-asụ ude nke ukwuu n'etiti mgbatị. Mkpụkpu a kwesiri ịhụ ahụ ike n’azụ ya, were ya na ị ga-ahụ mọzụ azụ ya site na uwe ya. You ga-ahụ ka ha bidoro n’elu ahụ ya gawa ala.
Ọ bụrụ n ’ọrụ akaa n’ihu otu elekere ma ọ bụ karịa n’emepụtaghị nwa nkịta, hapụ nkịta ọhịa ahụ ka ọ pụọ ma gagharịa. Nke a nwere ike inyere ndị ọrụ aka inwe ọganihu. Ọzọkwa, ọchịchọ nke ịkwanye nwere ike ịdị na-eche, na nkịta, dị ka a ga - asị na ọ ga-emerụ emerụ. Nwanyị a zụrụ azụ nke ọma agaghị achọ ịgbaji ụlọ akwụkwọ, ọ ga-alụkwa ọgụ nke ịkwanye, na-egbu oge ọrụ.
Ọ bụrụ na anụọhịa ahụ dị njikere ịpụ n'èzí, lelee ya anya. Ọ bụrụ na ọchịchịrị ya, were tọọchị. Nwa nkịta, ọkachasị, nwere ike ghara ịma ihe ọ ga-eme nkịta ọhụrụ ọ nwere ike ịhapụ ya.
Ọ bụrụ n 'ọrụ aka n'ihu ruo ihe karịrị awa atọ n'emeghị nwa nkita, kpọọ onye na-arịa ọrịa anụmanụ. Eleghị anya ị ga-ebu nkịta ahụ banye na veti ahụ.
Na-eche na ọrụ na-aga n'ihu, nkwekọrịta ga-abịa ngwa ngwa ma nkịta ga-amalite ịkwanye ike. Akpa mmiri ahụ ga-apụta, ma eleghị anya, ọ ga-agbaji, mgbe ahụ, a ga-enyefe nwa nkita obere oge. Plasenta nwere ike ọ gaghị adịcha njikere ịnapụta ya n’ebe a.
Nwere ike iji nwayọ dọpụta ụdọ ahụ iji hụ ma ọ ga-abịa mana ị kwesịrị ị gaghị adọta nwa nkita ahụ ka ọ chọpụta. Nwere ike ịdọrọ ụdọ ahụ puppy ma tinye ihe na-eme na hernia.
Anụọhịa nwere ike chọọ iri ebe ndị a na-ete nri. Echiche dị iche iche gbasara ma nke a ọ bụ ezigbo echiche. Peoplefọdụ ndị na-eche na ọ bụ ezigbo nri maka nwamkpa ahụ mgbe ọ na-agba ezigbo mbọ. Ndị ọzọ na-eche na nkịta ahụ ga-arịa afọ ọsịsa site n’iri ha. Fọdụ ndị na-azụ ihe na-ekwenye site na ịhapụ nkịta ahụ rie otu wee hapụzie ya.
Ihe ọ bụla ị na-eme, ịchọrọ ijide n'aka na ị nwere ebe obibi maka nwa ọ bụla a mụrụ. Ọ bụrụ na anụọhịa kwesịrị idowe placenta, ọ nọ n'ihe egwu ịnwe ọrịa akpanwa nke akpanwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime iji weghara ya na bezị n'oge a, ị ga-ehichapụ akpa mmiri mmiri site na imi na nwa nkịta na-ebu ụzọ. Jide nwa nkita ahụ elu iji nyere aka igbapu mmiri na imi si imi na akpịrị. Ghichaa nwa nkita ahu ike - o siri ike - ya na akwa nhicha, nhicha di ocha rue mgbe nwa nkita na-ada. Nhicha a ga - ehicha nkịta ahụ ma kpalie ya ịmalite iku ume.
Ọtụtụ mmadụ na-ekwe ka nwamba ahụ hichaa nwa nkịta ahụ wee taa eriri ụdọ. Ndị ọzọ na-eche na nkịta nwere ike ịdọta ụdọ ahụ nso nso nwa nkịta na-akpata eriri herni ma họrọ ịnagide nke a n'onwe ha iji nwee nchekwa.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịrụ ọrụ ahụ n'onwe gị, ị ga-egbutu ụdọ ahụ ihe dị ka 1 ″ pụọ n'ahụ ahụ ma kee ya na dental floss. Rinye ọnụ na ahịhịa ahụ na ngwọta Betadine (ma ọ bụ ọgwụ nje ọzọ dị ka ayodiin). Ọ ga-akpọnwụ ma daa n'otu ụbọchị ma ọ bụ karịa.
Ozugbo nwa ahụ na-eku ume ma dị ọcha, ma ị mere ya ma ọ bụ mmiri ahụ mere ya, ị ga-achọ iji nlezianya lelee nwa nkita ahụ, tụọ ma tụọ pup ahụ, chọpụta ihe ndị na-adịghị mma dị ka klọọkụ, ma chọpụta nwa nkịta ahụ n'ụzọ ụfọdụ. . Rickrack rịbọn na-arụ ọrụ nke ọma.
Tụọ ma bechaa otu nke buru ibu ka ọ kee ya n’olu puppy. Nke a dị mkpa naanị ma ọ bụrụ na ụmụ nkịta gị yiri nke a. Zọ ndị ọzọ iji kaa akara ụmụ nkita ahụ akara gụnyere ibelata ajị anụ ha n'akụkụ dị iche iche nke ahụ ha ma ọ bụ jiri ntu na-egosi ha.
Ọ bụrụ na ndị nkịta nwere ezumike n'etiti ụmụ nkịta, ị ga-ahapụ nwa nkịta nọọsụ. Colostrum (mmiri ara ehi ewepụtara na nke izizi 24) dị ezigbo mkpa maka ụmụ nkịta. Ọ na-eburu immunity nke na-echebe puppy site na ọrịa. Nọọsụ nwa nkịta ahụ ga-emekwa ka mkparịta ụka ndị nkịta na-eme ka ọrụ ya nwee ọganihu.
Were ohere zuru ike ma zuru ike mgbe ị nwere ike. Echegbula, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta nkịta puppy na dam ahụ ozugbo. Ha nwere ike ịga ọtụtụ awa na-enweghị ịnweta mmiri ara ehi na enweghị nsogbu. Ozugbo oru bidoro ọzọ, bugharịa ụmụ nkịta n'ime igbe incubator maka nchekwa ka ọgbaghara ahụ na-adọpụ uche.
Ọtụtụ mgbe a ga - enwe ezumike ogologo n'etiti puppy n'etiti ọkara. Can nwere ike ịkpọ nkịta ahụ pụọ n'èzí, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị achọ ịhapụ ụmụ nkịta ahụ (ịkwesịrị ịgba ya ume!). Ọzọkwa, ị ga-achọ ilegide ya anya iji jide n'aka na ọ naghị anapụta nwa nkita ebe ahụ ma ọ maghị ihe a ga-eme ya.
Ndị nkịta nwere ike ịbịa ngwa ngwa dịka nkeji iri na ise ma ọ bụ ogologo oge elekere. Ọ bụrụ na nkịta na-aga ihe karịrị otu elekere ma ị chere na e nwere ọtụtụ nkịta, kpọọ onye vet gị! Enwere ike ịnwe nwa nkịta ịrapara na ị ga-achọ ijide n'aka na ị ga-ewepụ ya ngwa ngwa o kwere mee.
Mgbe bitch gị mechara gwọọ, ị ga-achọpụta na ọ dị jụụ. Ume iku ume ya ga-akwụsịlata ma mgbu ga-akwụsị. Ikwesiri iduru umu nkita na umu nkita ya na veti n'ime oge anọ ma ọ bụ ise na-esote ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Emela ihe karịrị awa 24 n’etinyeghị ha nyocha.
Ọ bụrụ na ndị nkịta nwere a nọgidere puppy ma ọ bụ Plasenta, ọ nọ n'ihe ize ndụ nke oké ọrịa. Ọ bụrụ na nkịta ọ bụla nwere nkụpe ahịhịa ma ọ bụ nrụrụ ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka ị mara ozugbo enwere ike. Pumụ nkịta ndị a na-ejikarị ahụ ụmụ nwoke na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ha anaghị adịkarị ndụ.
Enwere ọtụtụ nsogbu ị nwere ike ịbanye na ya. Ọzọ, debe nọmba ekwentị gị na / ma ọ bụ nọmba ekwentị gị na ngwa ngwa ọ bụrụ na ị banye n'ọnọdụ ị kwadobeghi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ihe na-eme ma ọ bụ ihe ị kwesịrị ịme na-esote, egbula oge ịkpọ vet. Na-emeso ọnọdụ ndụ ma ọ bụ ọnwụ ọnwụ n'ezie ma ọ ka mma ịnọ na nchekwa karịa nwute.
Fọdụ ndị na-azụ ihe na-atụ aro idobere ọgwụ ụfọdụ n'aka iji nyere anụnị aka ma ọ nwee nsogbu ịbute ya. Nwere ike ikwurịta ihe a na veti gị mana anaghị m akwado omume a. Ọgwụ a siri ike ma nwee ike ịkpata nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na nsogbu a bụ nnukwu nwa nkita na-egbochi ọwa ọmụmụ. Nhọrọ kachasị mma bụ ka gị na onye na-elekọta anụ ụlọ gị na-emekọ ihe ma were nkịta gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
E nwere ụfọdụ ọgwụ ndị ọzọ nke ọtụtụ ndị na-azụ anụ na-eji ma na-atụ aro ugbu a nwere nsonaazụ yiri ya na-enweghị nsogbu nke mmerụ ahụ. Maka nwamba bekee nke ọrụ ya na-akwụsịlata, enwere ọgwụgwọ homeopathic akpọ Caulophyllum (Blue Cohash). Ekwesịrị itinye nke a mgbe nkịrịka nọ n'ọrụ na-abụghị arụpụta ọrụ.
Ejila ya belụsọ na anụọhịa doro anya na ọ na-arụ ọrụ. Maka ụmụ nkịta-nọ na nsogbu, ịnwere ike ịnwale ngwaahịa a na-akpọ Bach's Rescue Remedy. Ọ bụ ezigbo “nwayọọ ịmalite” maka ụmụaka nọ na nsogbu. Ga - etinye ntakịrị mmiri na ire puppy. Ihe dị mma banyere ọgwụgwọ ndị a bụ na enweghị ike iji ha mee ihe gabiga ókè. Ha dị oke nwayọ.
Ndị na-adọpụ ndị mmadụ site na homeopathic ma ọ bụ usoro ndị ọzọ ga-agwa gị na ọgwụgwọ ndị a agaghị eme ihe ọ bụla, nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ. (Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere isiokwu a, lee Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị E Mere n'okpuru. Enwere akwụkwọ ole na ole gbasara Ahụike Ọgwụ.)
Nsogbu mbu ị nwere ike ịhụ bụ anụọhịa nke na-amalite ọrụ mana ọ naghị aga n'ihu na-ebuga.
Nke mbụ, ị ga-anwale ịgagharị n'èzí iji hụ ma nke ahụ ọ na-enyere ya aka izu ike nke ga-amalite ịkwa ya. Ọ bụrụ na nke ahụ arụghị ọrụ n’ihe dịka nkeji iri na ise, ịnwere ike ịnwale usoro a kpọrọ “feathering.” Tinye uwe aka ịwa ahụ ma tinye obere mmanu mmanu dịka KY Jelly. Jiri nwayọ, jiri nwayọ, jiri nwayọ tinye otu mkpịsị aka ya na mkpịsị nke bitch wee jiri nwayọ na-akọrọ - ma ọ bụ nku - ya n'akụkụ elu ikpu ya. Nke a nwere ike inye aka kpalite mwakpo siri ike. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụpụta nsonaazụ ngwa ngwa ma ọ bụ na nkịta na-eme ike ọgwụgwụ ma ọlị, kpọọ onye vet gị. Ga-eleghị anya na-eme njem iji nweta ụfọdụ ọkachamara na-elekọta.
Vt ahụ nwere ike x-ray gị bitch iji chọpụta ole ụmụ nkịta na-eche ka a mụọ ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-adịghị mma (nwa nkita na-anwa ịpụ n'ụzọ na-ezighi ezi). Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, onye ahụ ga-enye gị ọgwụ injections nke calcium na / ma ọ bụ pituitary oxytocin.
Mgbapu ọgwụ ndị a na-akpalikarị mgbatị siri ike ma mee ka ọrụ na-agagharị. Ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ, maọbụ ọ bụrụ na ị na-emeso nwa nkịta buru ibu buru ibu ma ọ bụ na-ekwuhie okwu, ọ ga-abụ na vet ahụ ga-akwado ngalaba cesarian. Ekwesighi ka ewere ngalaba C dika ihe di egwu ma ha adighi egbochi. Ha dị oke ọnụ ma tinye ndụ nne na ụmụ nkịta na nnukwu ihe egwu. I kwesiri ikpebi n'oge a ma ichoro ka ndi ogwu a ghapu ogwu gi n'oge C-ngalaba.
Mgbe ụfọdụ, a gaghị enwe nhọrọ ọ bụla. Ọ bụrụ na etinyere emerụ ma ọ bụ bute ọrịa, ha ga-agwa nkịtị gị oge a. Ozugbo ị ruru n'ókè nke ngalaba c, a ga-ewepụ ọtụtụ mkpebi gị n'aka gị.
Isoro ndị ọkachamara gị na-ekwurịta banyere ihe a ga - eme tupu oge eruo bụ ezigbo echiche ka ị nwee ike ịchọpụta usoro ha si arụ ọrụ yana otu ha ga - esi mee ka ị nwee ike ịtụte ụmụ nkịta ahụ. Ọtụtụ vets agaghị ekwe ka ị banye ebe nyocha ha, agbanyeghị, ụfọdụ nwere ekele maka aka ndị ọzọ iji nwetaghachi ụmụ nkịta. Otu nsogbu kasịnụ na ngalaba C bụ nhụjuanya enyere bitch.
N'ihi na ụmụ nkịta ka rapara na sistemụ ya, a ga-enwerịrị ike ịta ha ahụhụ. Ọ dị ezigbo mkpa na onye na-elekọta gị ga-echebara nke a echiche mgbe ị na-anwu anwu. Ọtụtụ vets ga 'na-ekpuchi ya ala' na nke a bụ usoro akwadoro. Nke a pụtara na onye na-elekọta anụ ụlọ na-enye gas isoflourene ịmalite ya, kama ịnye ọgwụ dị ka Valium-Ketamine iji mee ka ọ hie ụra tupu ịmalite gas.
Ọ bụrụ na nkịta gị dị elu na / ma ọ bụ na-eme ihe ike, onye ahụ ga-ekwusi ike na ị ga-eme nhọrọ Valium-Ketamine, mana ọ bụrụ na anụ ụlọ gị dị mma ma bụrụ nke a na-achọsi ike, ị kwesịrị ịrịọ ka ha kpuchie ya. The gas dị nnọọ mfe na puppy system na ha ga-adị mfe karị ịtụte. The mgbake nke gị Anụọhịa ga-esi ike mgbe a c-ngalaba. Ọ bụ nnukwu ịwa ahụ nke afọ ma tinye nnukwu nsogbu na sistemụ ya.
Kaosiladị, ọ bụrụ na ihe niile agaa nke ọma, ọ ka ga-enwe ike lekọta ma nyekwa ya ahịhịa ya. Onye na-elekọta gị ga-enye gị ntuziaka zuru ezu maka nlekọta ya. Ha ga-ekwupụtakwa ọgwụ nje iji nyere ya aka izere ibute ọrịa. Kwesịrị ịkpachara anya na-enye ọgwụ nje ọ bụla n'ihi na ha ga-eme ka mmiri ozuzo ahụ na ụmụ bekee nwee afọ ọsịsa.
Ọnọdụ mgbe ị na-agaghị enwe oge iji gaa vet bụ mgbe ịnweghị ike ịnweta nkịta nkịta. Akwesiri ka puppy puppy ọ bụla rue mgbe ha ga-amị amị ma bido ịgagharị. Fọdụ n'ime ha bụ ndị amụrụ na mkpọtụ na achọghị enyemaka ọzọ mana ọtụtụ mgbe karịa ka anyị chọrọ, ụmụ nkịta chọrọ enyemaka ọzọ. Ọ bụrụ na nsị ahụ siri ike anaghị arụ ọrụ, ị ga-achọ ime ihe ngwa ngwa. Zọ kachasị ọsọ iji nweta mmiri si akpịrị nkịta na imi bụ ijide nwa nkita ahụ nke ọma ma bulie ya elu n'isi gị ma gbadaa ya ngwa ngwa n'etiti ụkwụ gị.
Ike ikuku nke etiti nwere ike ikpocha imi na akpịrị. Jide n'aka na ị na-akwado puppy isi na olu mgbe ị na-eme nke a ka olu ya dị nro anaghị emebi. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, ịnwere ike ịnwale iji sirinji bọlbụ na-achọ mmiri ọ bụla nwere ike ime. Mgbe ị na-arụ ọrụ na nwa, na-ete ya ọgụ nke ọma ma hụ na ọ dị ọkụ. Olileanya, a ga-akwụghachi gị ụgwọ ahụ nke ndụ na nwa nkịta ahụike.
Agbanyeghị, ị nwere ike ịkwụsị nwa nkịta. Nke a bụ mkpebi siri ike ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na nwa nkita ahụ na 15 nkeji na-enweghị nzaghachi, o yighị ka ị ga-emeghachi nwa nkita ahụ. Gakwuru dọkịta gị ka ọ mara maka ihe ị ga-eme nwa nkịta nwụrụ anwụ. N'ụzọ dị mwute, nke a abụghị ihe a na-ahụkarị na whelping.
Ozo, onweghi ihe ihere na iku ndi veti gi ka ha nyere gi aka. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-eme ma ọ bụ gosipụta gị ọnọdụ gị ma ọ bụ nkịta gị anaghị aghọta. Nweta enyemaka ndị ọkachamara!
Ozugbo whelping ahụ gafere, ị ga-adị njikere ịhapụ ezinụlọ ọhụrụ ahụ ka ha biri ma zuru ike nke ọma. Ma ị ga-achọ izu ike ahụ n'onwe gị. Jide n'aka na anụọhịa ahụ belatala onwe ya ma nweta mmiri ọ .ụ .ụ. Nye ya ogbo nke asa ka o wee di ocha ma di ohuru. Inye osikapa agba aja aja nri osikapa bu ezigbo nri mbu mgbe ebichara ya n'ihi na o gha adiri afọ ya ma nye ya otutu mmiri na nri.
Nne nke oge mbụ nwere ike inwe nnukwu obi abụọ gbasara ụmụ nkịta ndị a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịmụ nwa na-ewute ya. Nke a bụ oge ọzọ ebe nkuzi nrubeisi bara uru. Ọ dị oke mkpa na ị ga-enweta ụmụ nkịta na-elekọta nwa na-echekwa maka ha na nke ha. Na-etinye Anụọhịa na ala-ọnụnọ, banye na whelping igbe na ya iji mesie ya obi ike, ma tinye ụmụ nkịta na ya. Ọ bụrụ na ọ na-eto ma ọ bụ na-eme mkpesa, na-arịgo na nkịta, mee ka o dinara ma debe isi ya na puppy.
Ike ga-agwụ ya, ọ gaghịkwa alụso gị ọgụ nke ukwuu - na mgbakwunye, ọ na-erubere iwu gị isi, nri? Uru dị mkpa ebe a bụ na ụmụ bebi ga-enweta ụyọkọ ahụ dị mkpa nke ga-enye ha ikike nke nne ha. Otú ọ dị, uru ọzọ ọ bara bụ na nọọsụ ahụ na-eme ka ịhapụ homonụ banye n’ọbara ya.
Homonụ ndị a na-enyere aka ịkwalite mmuo nke nne nwa bitch. Ka ụmụ nkịta na-azụkwu nọọsụ, otú ahụ ka nne ga na-ahụkwu ha n'anya. (Ọ bụ eziokwu banyere ụmụ mmadụ.) Olileanya, nkịta ahụ ga-edozi ma nwee afọ ojuju dị ka ụmụ nkịta nọọsụ. Ka kwesiri ijikwa ụmụ nkịta na-elekọta ya ruo mgbe ị kwenyesiri ike na ọ nabatara ha nke ọma na ọrụ ọhụụ ya.
Izu Otu (aysbọchị 1-7)
90% nke oge ihi ụra
10% na-eri nri
Na-enwe ike ikpo ọkụ / oyi
Ntughari uche: na-ari ari, na-acho obi uto
Ha nwere ike idozi onwe ha ma ọ bụrụ na edobe ha n’elu
Achọrọ mkpali maka urination / ọdịda
Ọganihu ngwa ngwa nke usoro nhụjuanya nke etiti
Chọrọ nlekọta mgbe niile site na Anụọhịa
Rectal okpomọkụ 94-97 degrees Fahrenheit
Pups nwere ike ida 10% nke ibu mgbe amuchara nwa mana ha kwesiri ịmalite inweta ọzọ
Ibu ibu kwesiri okpukpu abuo na ngwucha izu
Chart ibu kwa ụbọchị (2 x kwa ụbọchị mbụ ụbọchị 2)
Nyochaa ụmụ nkịta kwa ụbọchị
Ewepụtụ mbọ kwa izu
Debe igbe whelping gburugburu 85 degrees Farenheit (nke a pụtara na ọ bụrụ na ọ dị ọkụ karịa nke ahụ, tinye fan n'ime ụlọ ma ọ bụ gbanye ntụ oyi, ọ bụrụ na ọ dị oyi karịa nke ahụ ga-enweta ọkụ ọkụ iji tinye n'elu igbe whelping)
Mgbe ị na - ejikwa ụmụ nkịta aka, ọ dị mma iji akwa nhicha mgbe ị na - ejide ha. Ndị nkịta ahụ na-agba mmamịrị na-akpali akpali na ha ga-enwerịrị ike ịchọta anya gị na-akpali akpali!
Ọ bụrụ na ìgwè gị chọrọ ọdụ, ntị, ma ọ bụ igirigi nsị, dozie nke a na vet gị.
Debe mmiri na mmiri maka awa 24 mbụ (yabụ. Broth chicken, wdg)
Na-eri nri atọ zuru oke kwa ụbọchị mgbe nke ahụ gasị
Mgbakwunye na 250 mg Vitamin C ugboro abụọ kwa ụbọchị
Ọ bụrụ na puppy bụ fussy, emeju Anụọhịa na Vitamin B mgbagwoju
Lelee mammary glands ugboro abụọ kwa ụbọchị (na-achọ ihe ịrịba ama nke mastitis - ọzịza, ekweghị ekwe, abu, wdg)
Lekwasị anya na nsị nke mmamiri (na-achọ ihe ịrịba ama nke ọrịa)
Jide n'aka na anụọhịa na-eri ihe, na-a drinksụ ihe ọ ,ụ drinksụ, ma na-egbochi onwe ya - ozugbo mmụọ nne ya malitere, ị nwere ike ịmanye ya ịhapụ ụmụ nkịta ịme ihe ndị a.
Debe ndekọ zuru ezu banyere ibu na omume ụmụ nkịta
Nọgidenụ na-charting bitch’s okpomọkụ
Kpọọ nkịta na-azụ ahịa na nsonaazụ nke whelping
Anya kwesiri imeghe ụbọchị 8-10
Ntị kwesịrị imeghe gburugburu ụbọchị 13-17
Okpomọkụ kwesịrị ịdị gburugburu 97-99F
Nọgidenụ na whelping igbe gburugburu 80-83F
Amalite ijide ụmụ nkịta na ụzọ dị iche iche (itinye nrụgide ọkụ)
Bitch kwesiri inweta okpukpu ato nke nri ya
Ezé na-amalite ịgbawa
Ndị nkịta na-ebili ma malite ịga ije
Bido ịmalite mmiri mmiri
Ihicha / urinate enweghị akpali
Bido ịmara gburugburu ebe obibi
Bido iso ndi mmadu na-egwu egwu
Zụlite isi nke isi
Ndị nkịta ga-amalite ịkpa ókè maka ebe ha ga-ebelata onwe ha
Malite itinye mgbakwunye (ihe egwuregwu) na ndụ puppy
Malite inye nrụgide akọwapụtara mgbe ị na-ejikwa aka (ya bụ. Tuo ntị ma ọ bụ mkpịsị ụkwụ nwayọ).
Bido inye pups mmiri ara ehi mmiri ara edo n’apara n’apata maka otu nri kwa ụbọchị - ka ụbọchị abụọ gasị, tinye ụfọdụ nri mushy
Buru ụmụ nkịta kwa ụbọchị
Nye ụmụ nkịta uwe elu ruru unyi nke gị ka ha jiri na-egwuri egwu
Bido oge ị na-eme kwa izu (brọsh, kpụchaa mbọ, lee ezé, wdg)
Milkzụta mmiri ara ehi edochi anya na-eri nri ụmụ nkịta
Bido iri nri
Bido ịgba egbe, ọdụ ọdụ, aru, ụkwụ, ezé na-enweghị isi, na-eti mkpu ma na-achụ
Jiri ụkwụ mee ihe nke ọma
Omimi omimi na-amalite
Nọgidenụ na-na mama ha ọtụtụ! Ihe nwere ike ịba ụba n'oge a ma mama m ga-agbakwunye ha kwụsie ike
Nwa ọ bụla chọrọ nlebara anya ọ bụla
Nye obere nri nke na-anọgidesi ike oatmeal (nwa nkita agwakọtara na mmiri ma gwakọta ya na blender)
Bido igbochi ohere nkiti na-acho umu akwukwo tupu inye ha nri
Omume otu na egwuregwu mmekọahụ ga-amalite
Dominance iji amalite
Ọganihu / mmepe ngwa ngwa
Belata mmiri mmiri na puppy ’nri
Gbaa mbọ hụ na ndị ọzọ bidoro ịbịa hụ ụmụ ha
Bido wepu ara
Kpọọ redio na ụda nkịtị n'akụkụ pups maka oge 5 n'otu oge
Bido belata oke nri iji gbochie mmepe mmiri ara ehi
Lezienụ anya nke ọma na mmiri ara ara
Soro onye na-agwọ ọrịa anụmanụ tụlee usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Izu Isii (aysbọchị 26-42)
Uto na mmepe na-aga n’ihu
Nye nri dị nro, nke dị mmiri mmiri
Chart ibu ibu kwa izu
Nlebara anya nke otu onye dị oke mkpa - nye gị nwa nkita ọ bụla oge ịhapụ gị
Iji kwadebe Anụọhịa maka ịkwapụ: :bọchị 1 - enweghị nri
Day 2 - 1/4 nkịtị mmezi nri
Day 3 - 1/2 nkịtị mmezi nri
Day 4 - 3/4 nkịtị mmezi nri
Day 5 - zuru ego nke nkịtị mmezi nri
Nọgide na-eri ụmụ nkịta nkịta ọtụtụ izu iji nyere ya aka ịgbake na nsogbu nke ịzụlite, ịkwa anụ, na ịzụ ụmụ nkịta.
Total ikike / visual ikike
Ga-enyocha ihe ọ bụla
Enweghị ike ịzaghachi ma nye aha
Pups kwesịrị ara na na mgbe nwa nkita nri
Pups nwere ike ịga n'ụlọ ọhụrụ
Lezie anya na mmiri ara ara ruo mgbe mmiri ara ehi na-akpọnwụ kpamkpam
Izu asatọ (aysbọchị 50-56)
Amalite ịmụ aha
Ejila ụmụ nkịta ụgbọ mmiri
Nwere ike ịmalite ịkụziri ụmụ nkịta obere obere
Izu nke itoolu (ụbọchị 57-63)
Na -emepụta omume siri ike na nke dị n'okpuru n'etiti ụmụ akwụkwọ ibe
Amalite ịmụta ezigbo agwa
Igwe ikike dị mma
Oge nlebara anya
Amalite itinye uche na onye nwe ya karịa ụmụ nkịta ndị ọzọ
Iche iche ndị na-ekpofu ahịhịa
Malite ọzụzụ ụlọ
Gaa n'ihu nlebara anya nke ọ bụla
Izu Iri (aysbọchị 64-70)
Nchekwa iji ụgbọ mmiri bute ụmụ nkịta site na ikuku
Maka ozi ndị ọzọ gbasara mmepe na ịzụlite nwa nkita, lee Nwa nkịta ọhụrụ gị.
Chọta ezigbo ụlọ maka ụmụ nkịta gị kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe kachasị mkpa gị. Nke a abụghị ọrụ dị mfe mana ọ bụ ezigbo ụgwọ ọrụ. Me nkịta kwesịrị ekwesị na ezinụlọ kwesịrị ekwesị bụ nnukwu mmetụta! Ndị na-azụ ihe maka ibu ọrụ na-anwa ịnwe ndepụta nke ndị chọrọ ịzụ ahịa tupu ha emewe ozuzu - ma ọ bụ opekata mpe tupu ha ebugharịa nri.
Dịka e kwuru na mbụ, enwere nnukwu nsogbu ịba ụba ụmụ anụmanụ na mba a, ọ dịghị ebe a na-atụfu mmiri na-enweghị nzube. Ebumnuche ahụ kwesịrị ịgụnye inye ụmụ nkịta achọrọ n'ụlọ ọma.
Thezọ kachasị dị irè iji chọta ụlọ bụ site na ijikọ na ntanetị nke ndị na-azụ ihe na mpaghara gị. Emere nke a kachasị mma site na ịchọta ụlọ ma ọ bụ ụlọ akuko na mpaghara gị, sonye, ​​na-arụsi ọrụ ike, na iji uru ha. Ọtụtụ klọb na-ebipụta ndepụta mkpofu na akwụkwọ akụkọ ha ma ndị otu klọb na-ezigara ndị na-akpọ ndị na-ede akwụkwọ.
Nke a bụ ụzọ ọzọ gị isonye na-egosi, ọzụzụ, ma na-arụ ọrụ nkịta gị na-eme ka ị bụrụ ezigbo ndị na-azụ ihe. Site na iwulite netwoko nke inweta ihe ndia, i megheere onwe gi ihe nkita.
Mgbasa ozi nwere ike ịba uru mana ejiri nlezianya mee ya. Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na-akpọsa litters na-abịanụ n'ime akwụkwọ ụdị. Ekwesịrị ịtụle mgbasa ozi nke akwụkwọ akụkọ dị ka ihe ikpeazụ maka ị kwesịrị ịnwe ụlọ ndị kwụ n'ahịrị tupu a mụọ ụmụ nkịta.
Mgbe okwu pụtara na ị na-eme ozuzu, ikekwe ị ga-amalite ịkpọ oku ekwentị site na ndị nwere ike ịzụ ya. Ga-akpachara anya nyochaa ndị na-azụ ahịa a na ekwentị na nke ọma na mmadụ tupu etinye ha na ndepụta nkịta gị. Ofdị ozi ị kwesịrị ịnwa ịnata n'aka ndị na-azụ ahịa kwesịrị ilekwasị anya na ikike ha dị ka ndị nwe nkịta.
Gbalịa ịtụle ebumnuche ha na nghọta ha banyere ịzụlite, ọzụzụ, na ilekọta nkịta. Shouldkwesịrị ịlele iji nyochaa ụlọ ha maka ihe dịka ma ha nwere ogige a gbara ogige, ma ọ bụrụ na ha ga-enwe ike ịnye ụdị mmega ahụ kwesịrị ekwesị na nkịta ahụ.
Ọ bụrụ na ụdị gị nwere echiche ịchọ mma pụrụ iche, ị kwesịrị ijide n'aka na ha ghọtara ndị a.
Akụkụ nke ọrụ gị dị ka onye na-azụ ihe na-arụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ nke ụdị ndị na-azụ puppy gị. Na mgbakwunye na ozi dị n'elu, ị ga-achọ ijide n'aka na ha ghọtara nchegbu niile gbasara ahụike maka ụdị gị. Ọ bụrụ na ha ajụghị ajụjụ ndị ziri ezi, ịkwesịrị ịdị njikere iji mejupụta ha na ozi ahụ mgbe ị na-akọwa ihe niile ị mere iji zere nsogbu ndị a.
Ọzọkwa, dị njikere na nwa nkịta bụ nhọrọ ziri ezi maka ha. Mgbe ị na-enyocha ndị na-azụ puppy, otu onye na-ezo aka na-ezo aka ọtụtụ n'ime ha na otu ndị ọrụ nnapụta ma ọ bụrụ na ha enweghị oge ma ọ bụ ume iji zụlite nwa nkịta.
Imirikiti ndị na-azụ atụrụ na-enye ngwugwu ozi gbasara ụmụ nkịta ha. Ihe ngwugwu ndị a gụnyere ụgwọ ọrịre, nkwa ahụike ọ bụla (dị ka a tụlere n’okpuru ebe a), nkọwapụta ihe nkịta ahụ kwesịrị inye, nkọwa banyere ihe gbaa na ikpuru nkịta e nyere, wdg. Ihe nkịta puppy nwekwara ike ịkọwa nkọwa nke ụdị ahụ, eserese, foto na mmekọrịta ahụike na nne na nna, ozi gbasara ọzụzụ, na ihe ndị ọzọ masịrị.
Onye na-azụ ihe kwesịrị ịdị njikere itinye ndụ ya niile na ụmụ nkịta ha na-emepụta. Ha kwesịrị ịdị njikere ịza ajụjụ ma ọ bụ nchegbu ọ bụla n'oge ndụ nkịta. Ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-emekwu nkwa iji weghachite nkịta n'oge ọ bụla n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na onye nwe ya enweghị ike ịchekwa nkịta ahụ.
Ndụ ndị mmadụ nwere ike ịgbanwe na obere ma ọ bụ na-enweghị ọkwa na nkịta na-ata ahụhụ mgbe ụfọdụ. Kama ịhụ otu n'ime nkịta ha na-akwụ ụgwọ na paụnd, ndị na-azụ anụ na-etinyekarị 'ikike nke mbu ịjụ' na nkwekọrịta ha.
AKC malitere n’oge nyere ndenye aha pere mpe. Nke a bụ nhọrọ dị mma maka ndị na-azụ anụ na-achọ ijide n'aka na ụmụ nkịta ha na-emepụta anaghị eji ha eme ihe n'ọdịnihu iji gbakwunye na nsogbu anụ ụlọ. Ndenye aha na-apụtaghị na nkịta ndị edebanyere aha enweghị ike igosi ma ọ bụ ụmụ ha enweghị ike ịdebanye aha ha na AKC.
Onye na-azụ ihe nwere ike ịgbanwe ndebanye n’ọdịnihu ma ọ bụrụ na ndị nwe ya ekpebie na ha chọrọ igosi ma ọ bụ zụlite ya. Onye na-azụ ya bụ naanị onye nwere ike ime mgbanwe ahụ. Ọ bụrụ na ị gaa na nhọrọ a, ị ga-achọ ịkọwa nke a nke ọma ndị na-azụ anụ ụlọ ka ha wee ghara ịghọtahie ma ọ bụ nwee nsogbu na ya mgbe ha bịara ịnakọta nwa nkịta ha.
Bredị nkịta ọ bụla nwere nsogbu ahụike metụtara ya. Ndị na-azụ atụrụ na-elekọta ọrụ na-eme ihe niile ha nwere ike ime iji zere nsogbu ndị a na mpempe akwụkwọ ha. Ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-achọta ụzọ ha ga-esi guzoro n'azụ usoro ozuzu ha site n'inye nkwa ma ọ bụ ikike na nkịta ha.
Nkọwa ga-agbanwe dabere na ụdị na ụdị nsogbu a hụrụ na otu ụdị. ’Ll ga-ekpebi ihe ịchọrọ ịkwado. Ọtụtụ ndị na-enye ego ma ọ bụ nwa nkịta na-anọchi ya mgbe ha nwetara ihe akaebe nke nsogbu ahụ. Statesfọdụ steeti nwere ihe akpọrọ “Iwu Lemọn” nke na - echekwa ndị na - azụ nkịta.
Kwesịrị ịchọpụta iwu dị na steeti gị iji jide n'aka ihe ọrụ gị.
Otu ihe atụ bụ na dysplasia hip: ọtụtụ ụdị dị iche iche nwere nsogbu na dysplasia na ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji nyochaa hips nne na nna. Agbanyeghị, ọbụlagodi na usoro ndị a, enweghị ụzọ iji hụ na ụmụ nkịta agaghị emetụta ha.
Ọ bụrụ na ụmụ nkịta na-enwe nsogbu, ụfọdụ ndị na-azụ ihe ga-akwụghachi ego nzụta na ebumnuche nke ịhapụ ụgwọ ọgwụgwọ anụmanụ maka ndị nwe ha. Ndị ọzọ na-azụ ihe ga-enye ndị nwe ha nwa nkịta na-anọchi anya ha n'ọdịnihu. Fọdụ ndị na-azụ anụ na-ekwusi ike na a laghachiri ụmụ nkịta ahụ metụtara.
Fọdụ ndị na-azụ anụ ga-ekwusi ike na a ga-ahapụ ma ọ bụ kpochie nwa nkịta metụtara ya tupu ị sọpụrụ nkwa ha. Ihe ọ bụla ị na-eme, ịkwesịrị ịkọwa nke ọma na ndị na-azụ gị gbasara amụma gị iji zere nsogbu n'ọdịnihu.
Ọtụtụ mmadụ na-abanye ozuzu na-eche na ọ bụ nnukwu ụzọ iji nweta ego dị mfe. Ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ n'ihu si eziokwu. Emela ya nke oma, ozuzu ozu adighi enwe ego. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla ma ọlị, ozuzu oke na-abụ ọdachi ego. Yabụ, ịkwesịrị ịdị njikere maka mmefu enwere ike ọ nwere ike ghara ịda. Idobe kaadị kredit ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji dozie ụdị nsogbu a.
Imirikiti ndị na-azụ ihe na-enweta nkwụnye ego n'ụdị ụfọdụ site na ndị na-azụ ahịa n'oge ụfọdụ n'oge usoro ahụ. Fọdụ ndị na-azụ anụ chọrọ nkwụnye ego tupu ha etinye ndị na-azụ ahịa na ndepụta ha. Fọdụ anaghị anabata nkwụnye ego ruo mgbe a mụsịrị ụmụ nkịta ahụ ma ha kwenyesiri ike na ha nwere nwa nkịta maka onye zụrụ ha.
Ihe ọ bụla ị kpebiri ime, biko gbalịa jiri nlezianya kọwaa n'okpuru ọnọdụ ị ga - ewe ma ọ bụ na ị gaghị eweghachite nkwụnye ego iji zere adịghị mma n'ọdịnihu.
Ihe ọ bụla ị mere, ị ga-achọ ịkwụ ụgwọ zuru oke tupu ị tụgharịa ụmụ nkịta gị nye ndị nwe ụlọ ọhụrụ. Ọnụ nke ụmụ nkịta na-adabere na ụdị gị na ahịa dị n'ógbè gị. Jụọ n'etiti ndị ọzọ na-azụ anụ, tụlee mmefu gị, ma setịpụ ọnụ ahịa kwesịrị ekwesị maka ụmụ nkịta gị.
Ọ bụrụ n’inwe nnukwu ite na-enweghị nsogbu, ị nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ mmefu gị, ikekwe, kpata obere ego. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọlị, gụnyere obere ebe a na-awụba n'oké osimiri, ị ga-abụ na ị ga-ewepụ ego na ị na-azụ ahịhịa. Emeela n'ụzọ ziri ezi, ịzụ ụmụ nkịta abụghị ụzọ isi mee ka akụnụba gị.
Ntuziaka na-ahụ maka Dog Anatomy (Muscle, Organ & Sletletal Drawings)
Italian Greyhound Dog Ajuju Ajuju
akwa dane agba na akara
kedu ka nwa nkita m ga-esi nweta chaatị
1 afọ uhie imi pitbull
esi chọpụta ụdị nkịta
Obere french bulldogs tozuru oke